Imifanekiso yePace kunye neShockBox VFX Yakha umanyano-I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi waseburhulumenteni weNAB Show-NAB BONISA LULA
ikhaya » iindaba » Imifanekiso yePace kunye neShockBox VFX Yakha umanyano
Abasunguli be-ShockBox: Umvelisi omkhulu UDanielle Addair, umlawuli uSteven Addair kunye nomvelisi ophetheyo uPeter M. Green.
Imifanekiso yePace kunye neShockBox VFX Yakha umanyano
F indawo yolungiselelo lwenkonzo ye-ull kunye neziphumo ezibonakalayo indlu yenza ngokusemthethweni intsebenziswano yokudala ukubonelela ngeenkonzo zokujika ifilimu kunye nomabonakude kunye nokugqitywa kwenyani.
HOLLYWOOD-Imifanekiso yePace, isandi esipheleleyo senkonzo kunye nesibonelelo semifanekiso yenkonzo esekwe ngaphakathi hollywood, kunye neShockBox VFX, ingcali ye-bi-yonxweme kwimpembelelo yokubonakalayo, oopopayi kunye nemizobo eshukumayo, benze umanyano lobuchule kwiiprojekthi zefilimu kunye nakumabonwakude. Ezi nkampani zimbini ziqeqeshekileyo zibonelela ngeesudiyo kunye nabavelisi ngeenkonzo ezihlanganisiweyo, ziquka zonke iinkalo zomsebenzi, ukuze kugqitywe nayiphi na iprojekthi ngokufanelekileyo, ngendleko-ngokufanelekileyo, nangolawulo olukhulu lokuyila.
Imifanekiso yePace President umongameli Heath Ryan
Isivumelwano senza ngokusemthethweni intsebenziswano yokusebenzisana esele ivela kwiminyaka emininzi. Imifanekiso yePace kunye neShockBox idibene ngokungacwangciswanga kwi2015 kwinto ezimeleyo Umgaqo kaNovemba. Ukusukela ngoko, badibene kwiiprojekthi ezininzi kubandakanya, kutsha nje, uthotho lweHulu IVeronica Mars, IiLionsgate's 3 isuka esihogweni kunye neMifanekiso yoLuntu jikelele ' Inkathalelo yoSuku luka-Makhulu kwaye Tyhila uMzalwana 2. Iphakeji ebonelelwe ngeenkonzo kubandakanya ukuhlelwa kokuhlela, ukuhlelwa kombala, ukugqiba kokuhlela kunye nokuxuba isandi. I-ShockBox inegalelo ezibonakalayo, oopopayi kunye nesihloko esiyintloko.
"Sibonelela ngeenkonzo ezincomekayo kwaye abasebenzi bethu baphucule iindawo zokusebenzela," utshilo umongameli wePace Picha uHeath Ryan. “Sifuna ukuqhubeka nokwakha kuloo nto. Umanyano olusemthethweni luzixhamla zombini iinkampani kunye nabaxumi bethu. "
"Kweli lizwe lanamhlanje lokuhlahlohla uhlahlo-lwabiwo mali kunye neeshedyuli zokuhanjiswa, ixesha lokuyila kwinkqubo yokuhlala linokufumana ubunzima," wongeza umsunguli weShockBox kunye nomphathi uSteven Addair. "Ngokusebenzisana kwethu nePace, abavelisi kunye neesudi zayo yonke ubungakanani ziya kukwazi ukwandisa imibhobho yethu ehlanganisiweyo yeVFX yomgangatho nomthamo."
Njengenxalenye yesivumelwano, iShockBox iya kushukuma imisebenzi yayo eseNtshona yeNtshona kwiziko elitsha lonke eliPace eliceba ukukuvula kamva ukuwa. Ezi nkampani zimbini ziye zamisela unxibelelwano olufihliweyo, olunesantya esiphezulu phakathi konxibelelwano lwePace, hollywood, kunye neShockBox, eNew York, ebavumela ukuba batshintshiselane ngedatha yeprojekthi ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo. "Sivelise ukuhanjiswa komsebenzi okusebenzayo apho umsebenzi uhlanganyelwa khona ngaphandle kwemvume," utshilo umvelisi ophetheyo weShockBox uPeter M. Green. Zombini iinkampani zikhokelwa ngabantu abasebenza kule femu ixesha elide, kumandla amaninzi. Ukongeza kwezixhobo ezandayo, siza nobutyebi bolwazi kunye namava. ”
Umsebenzi odibeneyo weenkampani ugubungele uluhlu lwezitayile kunye nobubanzi. Kwifilimu eyoyikisayo 3 isuka esihogweni, Imifanekiso yePace yayinoxanduva lokugqitywa kokuhlelwa, ukuhlelwa kombala wokugqibela kunye nokuhambisa, ngelixa i-ShckBox idala ngaphezulu kwe-500 imbonakalo yemiphumo Kuba IVeronica Mars, I-ShckBox yenzelwe kwaye yavelisa uthotho lwezihloko ezitsha zokuvulwa ngokulandelelana (iseti kuguqulelo olutsha lwengcombolo Sasidla ngokuba Ngabahlobo iculwe nguChrissie Hynde) noPace ophethe ukuhlela kunye neposi. Zimbini iifoto zoMhlaba oManyanisiweyo, Inkathalelo yoSuku luka-Makhulu kwaye Tyhila uMzalwana 2, Imifanekiso yePace ibonelele ngokuhlela, ukuhlelwa kombala kunye neenkonzo zokugqiba zokuhlela; I-ShockBox yayinguye kuphela umboneleli weziphumo ezibonakalayo.
Ukusekwa nguRyan kwi2005, Imifanekiso yePace inikezela ukuhlelwa kombala, ukugqiba kokuhlela, imbonakalo, ukunikela ngomxholo, uyilo lwesandi, ukudibanisa kwesandi, ulawulo lweendaba kunye neenkonzo ezinxulumene noko, ezifumaneka ngokukodwa, okanye njengezisombululo ze-turnkey. Kutshanje kubonelele ngeenkonzo zokuxuba isandi sokukhutshwa kweLionsgate Midway kunye neenkonzo zeposi ze20th Kwinkulungwane ye-Fox's I-Adra ye-Adra.
IShockBox, eyasekwa i-2015, ikhokelwa nguSteven noDanielle Addair, uPeter M. Green noJames Hall, kwaye igcina iiofisi zemveliso eNew York City kunye los Angeles. Iikhredithi ezongezelelweyo zibandakanya ii-Netflix's Brainchild, I-Fox kunye ne-WWE Studios ' Umncedisi omncinci kaSanta kunye neViacom / BET's IQuad. Abaxumi bayo baquka uSaban, Shudder, Pepsi, Filipu Electronics, Cirque du Soleil kunye nezinye ezizezinye.
Imifanekiso yePace yindawo egcweleyo yesandi kunye nendawo yokugqibezela imifanekiso. Inika uluhlu lweenkonzo zeposi kubandakanya ukuhlelwa kombala, ukugqitywa kokuhlelwa, iimpembelelo ezibonakalayo, ukunikezela ngomlinganiso, uyilo lwesandi, ukudityaniswa kwesandi, ukuphathwa kweendaba kunye neenkonzo ezinxulumene noko, ezifumaneka ngokukodwa, okanye njengezisombululo ze-turnkey. Abasebenzi bale nkampani liqela labadlali abaziingcali abanobugcisa nabanomdla kubugcisa bomabonakude, kumdlalo bhanyabhanya, kunye nenyani ebonakalayo kwaye sinikezelwe ekwenzeni yonke iprojekthi ngeyona ndlela ilungileyo inokubakho.
I-ShockBox, ulwahlulo lweBusterHill Entertainment, LLC., Igxile kwimiboniso ebonakalayo, imifanekiso eshukumayo, imbonakalo ye-2D kunye ne-3D, kunye nezihloko eziphambili, uyilo lwegraphic kunye nophuhliso lweengcinga kwifilimu, umabonwakude kunye neefilimu eziphezulu eziphezulu. Iqela leShockBox linamava okwenyani kwihlabathi-bhanyabhanya, umabonwakude, i-VFX, intengiso, i-PR, umxholo obekiweyo, usasazo lomculo, umculo kunye nokudlala.
Iikhredithi zamva nje zibandakanya iifilimu zeLionsgate / Rob Zombie 3 isuka esihogweni kwaye 31, Esihogweni kunye neMva (umfanekiso ongemva kweembonakalo ekwenziwa kwazo 3 isuka esihogweni), National Geographic's Iiyure ze-24 zeNyani: Khusela isiCwangciso sethu, INetflix's Brainchild, Yeyunivesithi Tyhila uMzalwana 2, Inkathalelo yoSuku luka-Makhulu kwaye Amanzi amakhulu amakhulu obuxoki, Ukuzonwabisa kwe-WWE Umncedisi omncinci kaSanta, BET IQuad kunye neYunithi yeFlavour's Umgaqo kaNovemba.
Ifilimu iMTI yokutyhila izixhobo ezitsha zeCTETEX kunye neDRS ™ Nova kwi-NAB Bonisa iNew York - Oktobha 14, 2019
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida ukuhlela UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw mveliso SJGolden - Iintetho kunye nemisrya IColonie I-Colonie - Iindaba IKOLONIE / Chicago BuTeknoloji TVU Networks Injini yeVidiyo ndiphila Iimpawu Zobonakaliso	2019-09-24
Previous: Iikhamera zeMarshall POV Thatha iSports ukusasazwa kwinqanaba elilandelayo nge 'Player Cam'
next: Ngenisa i-Vancouver yamkela i-Colourist uJimmy Hsu